Ogaden News Agency (ONA) – Rabshado Hadheeyay Gobolka Wallo & Jaamacadaha oo Xidhan.
Posted by Dulmane	/ January 2, 2017
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Wallo ee dhulka Axmaarada ayaa sheegaya in ay rabshado aad uwaawayn kasocdaan magaalada Dase ee Gobolka Wallo.
Sida xogta aan kuhelay rabshadaha ayaa yimid kadib markay ardayda jaamacadaha ee Gobolka wallo siwayn uga soo hor jeedsadeen qorshe ladoonayay in lagu ciidameeyo. Ardayda jaamacada Dagmada Dase oo qorshaha wayaanaha aad uga soo horjeeda ayaa banaanka isugu soobaxay iyagoo bilaabay mudaharaadyo rabshada wata iyagoo ardaydu ay beegsanayaan xarumaha xukuumada gumaysiga.
Warka ayaa intaas kudaraya in ay ciidanka wayaanuhu ardayda u adeegsadeen xoog zaa’id ah iyagoo jidh dil ba’an ugaystay arday aad ubadan oo kamid ah kuwii mudaharaadayay iyo waliba macalimiintii Jaamacada oo dhamaan xabsiga ladhigay.
Dhinaca kale ciidanka wayaanaha ayaa lagu soo waramayaa in ay jaamacada ka jareen biyihii iyo cuntadiiba waxaana lasheegayaa in ay baahi aad ubadan la kulmeen ardaydii katamid Gobolada kale ee Itoobiya halka kuwii deegaankuna ay u carareen guryahoodii oo udhaw.
Sida aan idiin sootabinayba waxaa todobaadkii ina dhaafay Jaamacadaha Gobolka Canfarta kasocday kacdoon ay ardaydu kala soo horjeedeen xukuumada wayaanaha ee mudada dheer gumaysanaysay.